असिका, माणा, निसौसे, रोटी खादै ‘पुसे १५’ पर्व मनाइँदै - NepalKhoj
असिका, माणा, निसौसे, रोटी खादै ‘पुसे १५’ पर्व मनाइँदै
नेपालखोज २०७६ पुष १५ गते १५:०६
१५ पुस, काठमाडौँ । डोटेली लोकसंस्कृतिको मौलिक पहिचान बोकेको ‘पुसे १५’ पर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै छ । एकापसमा ‘लोक कथा’ र ‘दन्त्य कथा’ सुन्ने र सुनाउने पर्वका रुपमा यसलाई लिइने गरिन्छ । डोटेली लोकसंस्कृतिमा ‘पुसे १५’लाई विशेष महत्वका रुपमा लिइन्छ ।
आजको रातलाई ‘ठूली रात’ मानेर घरमा मीठा खानाका परिकार पकाएर खाने र रातभर जाग्राम बस्ने, डेउडा खेल्ने परम्परा रहीआएको छ । दिनमा भन्दा रातिको समयमा एक ठाउँमा भेला भएर गरिने गतिविधिलाई विशेष महत्वका रुपमा हेरिन्छ । आजको रात वर्षभरिकै सबैभन्दा लामो रात मानिन्छ ।
छर छिमेक एक घरमा भेला भई आगो तापेर रातभर जाग्राम बस्ने, तरुल, पिडालु, सखरखण्डलगायतका कन्दमूल खाने गरिन्छ । साथै पाकेको फर्सी उसिनेर खाने, लाउन, बाबर, असिका, माणा, निसौसे, रोटलगायतका डोटेली खानाका मीठा परिकार बनाएर खाने र वृद्धवृद्धाबाट लोक कथा एवं दन्त्य कथा सुन्ने सुनाउने प्रचलन पनि छ ।
स्थानीय डिल्लीराज भट्टले आज १५ हात लामो दाउराको मुढोको आगो ताप्नुपर्ने र आपसमा हाँसो–ठट्टा गरी रमाइलो गर्दै रात बिताउनुपर्ने चलन रहेको जानकारी दिनुभयो । पर्वको तयारीस्वरुप हरेक घरका गृहेणीले आआफ्नो घरमा खानाका मीठा परिकार पकाउने तयारीमा लागेका छन् । पर्वमा विवाहिता छोरीबेटीलाई घरमा आमन्त्रण गरी भव्यरुपमा स्वागत र सत्कार गर्ने गरिन्छ ।
विशेष गरी रातमा नसुतेर यो पर्व मनाउने परम्परा रहेको भए पनि बदलिँदो परिवेशमा यसको खास महत्व दर्साउने गरी मनाउने परम्परा भने हराउँदै जान थालेको जानकारको भनाइ छ । पर्वको मौलिकपना लोप हुन नदिन सबै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
पूजा गर्दा घण्टीको महत्त्व !
वैभव लक्ष्मी !
भैरवस्थानको गुरुयोजना अलपत्र, आठ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आएन